Nagu saabsan - Kooxda Zishan
Koox Soo Koobid
Zishan Group waxaa la aasaasay bishii Maarso 1984 waxayna ku taalaa magaalada Zhangzhou City, taas oo loo yaqaan "Magaalada Cuntada Shiinaha" iyo "Raashinka Cuntada Qasacaysan ee Shiinaha" iyo "Capital Mushroom Capital" ee koonfurta Shiinaha. Ka dib 34 sano oo horumarineed, hadda waa la dhammaystiray silsiladda warshadaha cuntada ee isku-darka dhismaha saldhigga, soo-saarka, wax-soo-saarka iyo suuq-geynta ayaa ka baaraandegi kara ku dhowaad 200,000 tan oo ah wax soo saarka beeraha iyo dhinacyada dhinac walba sanadkiiba. Waa shirkad muhiim ah oo horseed u ah warshadaynta beeraha, tobanka shirkadood ee ugu sarreeya warshadaha qasacadaynta Shiinaha, iyo ganacsi muhiim ah oo joogto ah warshadaha cuntada qaranka. Sanado badan, waxaa lagu qiimeeyay "cashuur bixiye weyn" Dowlada Magaalada Zhangzhou.
Zishan waxay diirada saareysaa wax soo saarka cuntada iyo dhoofinta. Waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah cuntada qasacadaysan, pickles, curry, biyaha macdanta, waxsoosaarka biyaha ee la qaboojiyey, khudradda iyo khudradda, beeritaanka warshadda likaha iyo qaybo kale oo waaweyn, oo inta badan loo dhoofiyo Yurub, Ameerika, Japan, Koonfur-bari Aasiya, Ruushka iyo in ka badan 60 Dal oo adduunka ah iyo gobollada, lambarka dhoofinta "Q51" waa mid caan ka ah adduunka, gaar ahaan Japan, Jarmalka iyo waddamo kale oo leh shuruudo adag oo ku saabsan tayada cuntada. Aqoonsiga suuqa ayaa aad u sarreeya. Cuntada qasacadaysan ee Zishan ee dibedda ku taal waxay u taagan tahay sawirka cuntada Shiinaha ee qasacadaysan.
Kooxda Zishan waxay u hoggaansameysaa himilada ah "bixinta cunto aamin ah, caafimaad leh, oo la hubo bulshada"; adoo ilaalinaya caqiidada dhaqanka calaamadda ee ah "u oggolaanshaha macaamiisha inay iibsadaan alaabada Zishan inay la mid tahay iibsashada nabadda maskaxda, cunista alaabada Zishan waxay la mid tahay cunno caafimaad leh", waxayna had iyo jeer muhiimadda siisaa tayada cuntada iyo maareynta amniga, Waxay dhaaftay ISO9002, HACCP, "Hala", " Kosher ", Shahaadada FDA ee Mareykanka, European BRC (Global Food Technical Standard) iyo IFS (Heerka Cuntada Caalamiga ah) Zishan Group waxay hogaamisay kana qayb qaadatay sameynta iyo dib u eegista lix heer qaran ama warshadeed, oo ay kujiraan "Canpara Asparagus", "Shellfish Canned" iyo "Kalluun qasacadaysan". Kooxdu waxay leedahay 12 shatiyo sax ah, oo ay ku jiraan 1 patent hal abuurka, iyo heerka beddelka ee guulaha sayniska iyo farsamada ayaa gaaraya 85%.
Shirkii Xiamen BRIC ee 2017, "Purple Mountain Coriander Heart" iyo "Purple Mountain Yellow Peach Canned Canned" ayaa loo xushay inay yihiin cunnooyinka BRIC, iyo "Badeecada Buurta Purple, BRIC Tayada" Zishan Foods, oo loo dhoofiyo suuqa caalamiga, waxay ahaayeen aqoonsaday dhacdada caalamiga ah. Waxsoosaarka shirkadda iyo iibinta boqoshaada qasacadaysan, asparagus, iyo lychee ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya isla warshadaha dalka. Canshuurta Tamaandhada Zishan waxaa lagu qiimeeyay inay tahay "Wax soo saarka Cunnada Qasacadaysan ee Shiinaha ee Shiinaha", Zishan "Bulaoquan" waxay noqotay shirkadda loo yaqaan 'Xiamen Airlines' ee loogu talo galay cabitaanka.
Sanadihii la soo dhaafay, Kooxda Zishan waxay si xoog leh u ballaarisay silsiladda warshadaha, waxay maalgashatay dhismaha Zishan Edible Fungus Silicon Valley Industrial Park, waxayna u heellan tahay inay dhisto koox warshadeysan oo casri ah oo ugu casrisan warshadaha cuntada Shiinaha. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay ka faa'iideysatay juqraafiga xeebta iyo shahaadada dhoofinta EU-da ee badda (kaliya seddex Zhangzhou), waxay ku dartay 2 khadadka wax soo saarka fillet kalluunka cusub, oo ku hawlan horumarinta iyo ka faa'iideysiga ballaaran ee kalluunka qasacadaysan ee ugu sarreeya, mashruuca waa kii ugu horreeyay ee ka tirsan Gobolka Fujian, teknolojiyadduna waxay gaaraan gobolka. Heer sare iyo faa'iido tartan suuq leh.
★ Shirkadaha waaweyn ee hormoodka ka ah warshadaynta beeraha ee sideed wasaaradood oo qaran ah
★ Mashruuca Banaanbaxa Qaranka ee Wax soo saarka Beeraha Mashruuca Qoto Dheer ee Komishanka Horumarinta & Dib-u-habeynta
★ Shirkadaha Muhiimka ah ee Qaranka ee Badeecadaha Degdega ah, Wasaaradda Ganacsiga
★ Koowaad iyo Toddobaad Qandaraaska Qaranka U-hoggaansanaanta & Aaminada, ee ay soo saartay Maamulka Warshadaha Qaranka iyo Ganacsiga
★ China Top Ten Cannery Enterprise (Dhoofinta)
★ AA Fasalka Dhibcaha Enterprise by CIQ
★ Tobanka shirkadood ee ugu sareeya sanadka 2014 shirarka sanadlaha ah ee badbaadada cunada ee shiinaha, qabanqaabiyaha kulanka
★ Shirkadda Muhiimka ah ee Hormuudka ka ah Warshadaynta Beeraha, Billad Dahab ah oo ka tirsan Shirkadda Astaanta Beeraha ee Gobolka Fujian, Shirkadda ugu fiican ee amaahda ee Gobolka Fujian, oo ay maamusho Dawladda Fujian